अनि सेटिन बने बार्सिलोना प्रशिक्षक‍...- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
अनि सेटिन बने बार्सिलोना प्रशिक्षक‍...
बार्सिलोनासम्म सेटिनको यात्रा
माघ ४, २०७६ हिमेश
काठमाडौँ — त्यस दिन क्वेक सेटिन आफ्नो घरतिर गाई चराइरहेका थिए । एक प्रकारले काम नभए फुर्सदिला थिए । प्रस्ताव आइपुग्यो, बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बन्नु पर्ने भयो भनेर । सपनामा त जे पनि देख्न पाइन्छ । तर सेटिन आफैले त्यस्तो सपना देखेका थिएनन्, कुनै दिन विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय र सफल फुटबल क्लबको प्रशिक्षक बन्छु भन्ने ।
त्यो पनि लियोनल मेसी खेल्ने क्लब । उनले नाइँ कसरी पो भन्न सक्थे र ? भोलिपल्ट बार्सिलोनाले क्याम्प नुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई प्रस्तुत गरिहाल्यो ।
पत्रकारसामु खुबै खुसी देखिएका थिए, ६१ वर्षीय प्रशिक्षक । केही ठूला अपवादलाई लिएर भन्ने हो भने बार्सिलोना जति ठूलो क्लब हो, उसको प्रशिक्षक उत्तिकै ठूलो हुने गर्दैन । बार्सिलोनाले आफैले आफैलाई ‘मोर देन ए क्लब’ भन्छ, तर प्राय: प्रशिक्षक रोज्छ, ठिक्कको । साधारण । खाली बार्सिलोनाको सर्त हुने गर्छ, यी प्रशिक्षकले क्लबको मर्म बुझेको हुनुपर्छ, बार्सिलोनाले जसरी फुटबल खेल्ने गर्छ, त्यसरी नै खेल्नु पर्छ । अब भनिरहनु पर्दैन, सेटिन यही काममा माहिर छन् ।
विश्व क्लब फुटबलमा अहिले जति पनि चर्चित प्रशिक्षक छन्, त्यसको छेउछाउमा पनि छैनन् उनी । यो सिजनको सुरुमा उनले काम पनि खोजेनन् । चुपचाप नै रहे । तर जसले राम्रोसँग बार्सिलोना र स्पेनी फुटबलको राजनीति बुझेका थिए, ती सबैले यसअघि नै भनिसकेका थिए, यी सेटिन कुनै न कुनै दिन यो क्याटलान क्लबको प्रशिक्षक बन्छ नै । सेटिन हाकाहाकी बार्सिलोनाले खेल्ने फुटबल शैलीका प्रशंसक थिए । अनि मेसी भनेपछि हुरुक्कै हुने, अनि उनीबारे कुरा गरेर नथाक्ने ।
कुनै बेला उनले भनेका थिए, ‘मेसीले ६० वर्षसम्म फुटबल खेल्नु पर्छ र म त्यो मन लगाएर हेरिरहने छु ।’ अब भयो के भन्दा पछिल्ला दुई सिजन बार्सिलोनाका ठीक्कै रह्यो । प्रशिक्षक थिए, एरनेस्टो भाल्भर्डे । लिग लगातार जितिरहेको थियो । युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा पनि प्रदर्शन ठीक्कै थियो । तर बार्सिलोना यस्तो क्लब हो, जसलाई जितेर मात्र पुग्दैन् । राम्रो पनि खेल्नु पर्छ । अझ भनौं, बार्सिलोना जित्न मात्र खेल्दैन, उसको काम त सुन्दर फुटबल पनि पस्कने हो, जसले उसका समर्थक कायल होस् ।
यसमा भाल्भरडे चुके । गत सिजन यिनै सेटिन रियल बेटिसमा प्रशिक्षक थिए । बेटिसले त्यति खेल्न शैली भने बार्सिलोनाको जस्तो थियो, लगातार पास खेल्ने, विपक्षीलाई बल छुन नै नदिने । अनि मौका पायो कि गोल गर्ने । यस्तै शैली खेलेर बेटिसले बार्सिलोनालाई उसकै घरमा हराइ पनि दिएको थियो । बेटिस जानुअगाडि उनी आफ्नै घरको क्लब रेसिङ सान्टेन्डरमा थिए । त्यहाँ पनि उनले खेलाउने शैली यस्तै थियो, बार्सिलोनाको जस्तो । अनि यी दुवै क्लबका प्रशिक्षक भएर पनि उनले बार्सिलोनाकै मात्र कुरा गर्थे ।
अनि मेसी विश्वकै सबैभन्दा राम्रा फुटबल खेलाडी हुन् भनेर दाबी गर्न पनि चुक्दैन थिए । बेटिस र सान्टेन्डरका समर्थकलाई भने उनको यो काम पटक्कै चित्त बुझ्दैन थियो । तर यी दुवै काम गर्न सेटिन कहिल्यै पछाडि परेनन् । उनी खेलाडी जीवन सकाएर भर्खरभर्खर प्रशिक्षक बन्ने सुरसारमा थिए, एक दिन योहान क्रोएफको बार्सिलोनाले खेलेको हेरेछन् । ठीक त्यही दिनदेखि उनको फुटबलप्रतिको नजर नै सधैंका लागि परिवर्तन भयो, अनि भनिहाले, फुटबल खेल्नु पर्छ त बार्सिलोनाले जस्तो ।
नत्र नखेले पनि हुन्छ । स्पेनले विश्वकप र युरोकप जित्दा जस्तो फुटबल खेलेको थियो, त्यो शैलीको निर्माण त क्रोएफको बार्सिलोना कारखानामै त भएको थियो । मीठा छोटा छोटा पास, जसलाई हेरिरहुँ जस्तो हुन्छ । विपक्षी टिमको काम पनि यही पासलाई पछ्याउनु मात्र हुने गर्छ । त्यो शैलीलाई सुहाउनु गरेर खेलाडी व्यक्तिगत रूपमा राम्रो त हुनु नै पर्‍यो । यो शैली आक्रमक पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसै यी डच लिजेन्ड क्रोएफलाई विश्व फुटबलकै सबैभन्दा ठूला रणनीतिकार हुन भनेर त्यसै भनिएको त पक्कै होइन ।
अब घुमाइफिराइ यिनै सेटिक बार्सिलोना पुगेका छन्, प्रशिक्षक भएका छन् । अनि भनिरहेका छन्, अब बार्सिलोनाले त्यसरी नै खेल्छ । यस सप्ताहन्तका खेलमा नै उनी बार्सिलोनाको प्रशिक्षकका रूपमा उभिने छन् । यो त भयो, सेटिनको बार्सिलोनाको प्रशिक्षक हुनुसम्मको यात्रा र कारण । यो त सबैले देखेको र सुनेको नै भयो । पूरा कथामा एउटा भित्री पाटो पनि छ । र, यो हो, बार्सिलोना क्लब फुटबलको राजनीति । बार्सिलोनाले भाल्भर्डेलाई हटाउने निर्णय त गर्‍यो, तर नयाँ प्रशिक्षक को ल्याउने त ?
बार्सिलोना क्लबका अध्यक्ष हुन्, जोसेप मारिया । उनकै निर्देशनमा क्लबले आफ्ना पुराना खेलाडी जाभीसँग प्रशिक्षक हुन् कुराकानी चलाएको थियो । त्यसैले हल्ला चलिसकेको थियो, भाल्भर्डे बर्खास्तीमा पर्नेछन् र जाभीले प्रशिक्षकको जिम्मा पाउने छन् । जाभी भने कतारमा थिए, अल सादको प्रशिक्षकका रूपमा । तर घटनाले त्यहीबेला ‘ट्विस्ट’ लियो ।
जाभीले निर्णय गरे, कम्तीमा अबका एक वर्ष अल सादमै रहने र बार्सिलोना नजाने । खासमा बार्सिलोना क्लबमा घरेलु राजनीति खुबै चल्ने गर्छ । जाभी व्यवसायी भिक्टर फन्टको नजिकका साथी हुन् । फन्ट तिनै व्यक्ति हुन्, जसले अर्को वर्ष क्लबको अध्यक्ष पदका लागि हुने चुनावमा भिड्‌ने विचार गरिरहेका छन् । त्यसैले बुझियो, जाभीले बार्सिलोना आउँदिन भन्नुको अर्थ यो क्लबलाई अस्वीकार गरेको होइन, बरू अध्यक्ष मारियालाई मात्र अस्वीकार गरेका हुन् ।
आखिरमा फन्ट र मारिया परस्पर प्रतिद्वन्द्वी नै हुन् । फन्टसँगको नजिकको सम्बन्धकै कारण बार्सिलोनाका अर्को लिजेन्ड कार्लेस पुयोलले पनि सेप्टेम्बरमा स्पोर्टिङ डाइरेक्टरको पद अस्वीकार गरेका थिए । मारिया पनि यो निर्णयमा पुगे कि जाभीलाई ल्याउन सकिन्न । फेरि जाभीले अल साद जस्तो सानो क्लब हेरेर पनि मस्त कमाइरहेका थिए, अबको विश्वकप अगाडि कतार छाड्‌नु उनका लागि ठीक पनि थिएन । त्यसैले मारियाले राजे, यिनै सेटिन । यो अर्थमा उनी भाग्यमानी पनि रहे । अनि सेटिनले पाए सपनामै नसोचेको काम ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७६ १३:०९
प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय अन्योल
माघ ४, २०७६ रासस
काठमाडौँ — प्रदेश २ मा प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा, प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा अन्योल बढ्दै गएको छ । लामो समयदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन नभएका कारण यी विषयमा अन्योल बढ्दै गएको हो ।
बेलाबेलामा प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा, स्थायी राजधानी र नामकरणबारे केही सदस्यले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा अभिव्यक्ति दिए पनि सो अनुसारको दृढताका अभावले यी विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिएको छ । प्रावधानअनुसार यी विषयको टुङ्गो लगाउन दुई तिहाइ मत चाहिने तर दर्ता भएका फरक–फरक प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न दुई तिहाइ मतको सम्भावना नदेखिएकाले विवादित विषय टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं २ मा ८९ भाषा रहेकामध्ये ‘मैथिली’ भाषीको सङ्ख्या सर्वाधिक २४ लाख ४७ हजार ९७८ रहेको छ । दोस्रो स्थानमा ‘भोजपुरी’ भाषीको १० लाख तीन हजार ८७३ र तेस्रो स्थानमा ‘बज्जिका’ भाषीको सात लाख ९१ हजार ६४२ रहेको छ ।
२०७४ माघ ७ गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा १०७ सदस्यमध्ये ४७ मैथिली, २५ भोजपुरी, २४ नेपाली तथा ११ जनाले हिन्दी मातृभाषामा शपथ लिएदेखि नै मैथिली भाषासँग दुराग्रह गरिएको प्राध्यापक परमेश्वर कापडी भन्छन् । उनी भन्छन्, “विडम्बना के छ भने हिन्दी मातृभाषा भनी शपथ लिएका कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यको मातृभाषा हिन्दी छैन ।” तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा हिन्दी मातृभाषीको सङ्ख्या आठ हजार ६२५ (०.२ प्रतिशत) तथा मगही भाषीको सङ्ख्या ३१ हजार ४८ रहेको छ । त्यस्तै नेपालीको तीन लाख ६० हजार २७६, उर्दूको तीन लाख १० हजार ६७२, थारू दुई लाख तीन हजार ५७५ र तामाङ भाषीको सङ्ख्या एक लाख चार हजार ९८४ रहेको छ ।
पण्डित गोविन्द झा मगही मैथिलीको अधिक निकट रहेकाले यो समस्या देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मगही र मैथिलीको अधिकांश उखान र प्रसङ्ग एउटै भएकाले पनि सङ्घर्षको स्वरूप देखिएको छ ।” इतिहासको कालखण्डमा भारतको विहारमा ब्राह्मण र राजपुतबीच भएको सत्ता सङ्घर्षको परिणाम बज्जिका, मैथिली र मगहीमाझ विभेद उत्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।
वरिष्ठ पत्रकार एवं कथाकार वृजकुमार यादव टेटी (ग्रामीण शब्द) का बारेमा भ्रम उत्पन्न गरी टेटी शब्दलाई मगही भन्दै प्रचारप्रसार गरेर भाषिक पहिचानमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरिएको बताउँछन् । साहित्यकार अयोध्यानाथ चौधरी निर्वाचनका बखत मैथिली भाषामा मत माग्ने र निर्वाचित पाएपछि मैथिली भाषालाई उपेक्षा गरी अन्य भाषाको मान्यताका लागि लागिपर्नु चिन्ताजनक विषय भएको बताउँछन् । उनले प्रदेशसभा सचिवालयले कामकाजको विषयमा प्रस्ताव दर्ताको आवेदन नलिनु पनि गलत भएको बताए ।
साहित्यकार रामभरोस कापडी सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा भाषा संस्कृति प्रतिष्ठान गर्ने र सोका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइए पनि यस प्रसङ्गमा सामाजिक विकासको कुनै अग्रसरता देखा नपरेका कारण चलखेलमा वृद्धि भएको बताउँछन् । “प्रदेश सदस्यले विकास योजनाको भुक्तानीका लागि प्रदेशसभा नै अवरुद्ध गर्ने तर प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि किन मौनता देखिएको छ ?”, उनी प्रश्न गर्छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा राख्ने प्रस्ताव गर्नु र सोको विरोध भएपछि सरकारी कामकाज भाषा निर्धारण विषयलाई गौण बनाइएको देखिएको छ ।
सचिवालयमा प्रदेशको नामकरणका लागि चार र राजधानीका लागि पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता गराइएकामध्ये सत्तासीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रति सोही दलसँग आबद्ध सातजना सदस्यले राजधानी तोक्ने विषयमा फरक प्रस्ताव दर्ता गराइएको स्थिति रहेको छ । प्रदेशको नामकरणका लागि नेकपा ले जानकी, कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र सत्तासीन समाजवादी पार्टी नेपाल एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा मधेश प्रदेशको नाम दर्ता छ ।
त्यस्तै सत्तासीन दलकै सातजना सदस्य संयुक्त प्रस्तावको विपक्षमा राजधानी वीरगञ्जसहित विन्ध्यवासिनी, पोखरिया, पर्सागढी, जितपुर हुँदै सिम्रौनगढको क्षेत्रफलको प्रस्ताव अघि सारिएको देखिएको छ । नेकपाले राजधानी जनकपुर, परिक्रमा मार्गसहित पूरै धनुषा जिल्लाको प्रस्ताव गरेको छ कांग्रेस राजधानी जनकपुरधाम र क्षेत्रफलमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रस्तावमा बहस गरिरहेको पाइन्छ । सोही दलका चारजना सदस्य सोप्रति विमति राख्दै राजधानीका लागि वीरगञ्जको नाममा मत जुटाउन लागिपरेको स्थिति पनि रहेको छ ।
मुख्यरूपले प्रदेशको नामका लागि मधेस, जानकी र मिथिला नाममा मत जुटाउन दलहरू संवाद गरिरहेको देखिए पनि सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणबारे प्रस्टता देखा नपर्नु यो विषयलाई अँध्यारोमा राख्ने दुष्प्रयास भएको साहित्यकार श्यामसुन्दर शशि बताउँछन् । प्रदेशसभामा सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी नेपालका ३०, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका २५, नेकपाका ३२, कांग्रेसका १९ जना सदस्य छन् ।
कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव आफ्नो दल मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै यसका लागि अन्य दलसँग पनि संवाद गर्न जरुरी भएको खाँचो औंल्याउँछन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साह संविधानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा अधिक अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरिएको व्यवस्थाअनुरूप सबै भाषाप्रति विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् ।
उनी मानवीय चिन्तनको इतिहासमा मिथिला क्षेत्रको अन्य स्थान रहेको, आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा मधेस र भाषिक, सांस्कृतिक दृष्टिले भोजपुरा महत्वपूर्ण रहेकाले टुङ्गो लगाउन सबैको महत्व र सम्भावनाप्रति सघन संवादको खाँचो औँल्याउँछन् । मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले मिथिला क्षेत्रबाट जितेका केही सदस्य मधेशको पक्षमा लाग्नु दुःखद भएको बताए । उनी इतिहास, पुराण प्रसिद्ध मिथिला र मैथिलीको अस्तित्वलाई गौण पार्ने षडयन्त्रमूलक कार्यप्रति सजगताको आवश्यकतामा जोड दिन्छन् ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७६ १२:३३